Apple dia voatery milefitra amin'ny governemanta sinoa ary manome azy ny teny miafin'ny mpampiasa azy | Avy amin'ny mac aho
Iray volana latsaka kely lasa izay, Nanokana ivon-data vaovao any China i Apple, ivon-data izay noterena hosokafana i Apple ao amin'ny firenena, manaraka ny lalàna mifehy ny governemanta vaovao, lalàna mifehy ny orinasan-teknolojia hitahiry ny angon-drakitra ampiasain'ny mpampiasa azy ireo, toa izany koa any Russia.
Saingy toa tsy izany irery no notakin'ny governemanta sinoa, satria nitaky ihany koa ny lakilen'ireo mpampiasa, ny lakile izay tsy misy raha tsy any Etazonia ihany, na aiza na aiza no niavian'ny angona momba ny mpampiasa, hahita ny firenena izy ireo, firenena izay, rahateo, tsy manana lalàna mifandraika amin'ny tsiambaratelo.
Amin'izany fomba izany, satria voatery miangona ny tenimiafin'ny mpampiasa ao amin'ny firenena ny orinasa miorina amin'ny Cupertino, ny fiarovana ny angon-drakitra rehetra voatahiry ao amin'ny firenena dia tsy misy, satria afaka miditra ao amin'izy ireo ny manampahefana isaky ny te hanana izany, na inona na inona antony ary tsy mila manantona mpitsara, toy ny tranga any amin'ny ankamaroan'ny firenena tandrefana sy ny sisa amin'ny tany.
Raha naneho hevitra imbetsaka aho, Apple dia orinasa tsy maintsy mitady vola, tsy misy ilana azy ny manangana saina hiarovana ny angon-drakitra ampiasain'ny mpampiasa azy rehefa ao anatin'ireny karazana toe-javatra ireny, toe-javatra izay tereny izy ireo handatsaka ny patalohany amin'ny fiovana voalohany, raha te hanohy hiresaka momba ny toerana misy anao eo amin'ny tsena ianao.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, Nanjary motera manan-danja ho an'ny orinasa SinaNoho izany, tsy azo avela hiala eto amin'ity firenena ity izy, manandrana mitazona ny toeran'ny fahaleovany tena sy ny filaminana natolony an'ireo mpampiasa azy rehetra. Farafaharatsiny mba antenainay fa amin'izao fotoana izao dia izy irery no firenena manana an'io karazana fangatahana io, satria raha lasa mahazatra io dia maro ireo mpampiasa no manangana ny mpamatsy azy manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Noterena hanome ny governemanta sinoa i Apple ary manome azy ny teny miafin'ny mpampiasa azy